Home Wararka Farmajo iyo Kheyrow Xagee dalkaan u waddiin? Jawaabtu waa Dagaal Sokeeye!!
Farmajo iyo Kheyrow Xagee dalkaan u waddiin? Jawaabtu waa Dagaal Sokeeye!!
Walaalayaalow maanta talada idinkaa gacanta ku hayee ha yareysanina oo fahma dareenka aan qabno oo ku dhisan xusuus iyo sansaan saaka soo muuqata. Dalkaan waxaad u waddaan in markale la isdilo kumanaan kale naga dhintaan.
Walaalaha Somaliyeed ee dhibatada dalka damqeyso waxaa la gudboon inay maanta iska qabtaa dawladdaan oo dalka la badbaadiyo. Cid kasta oo qiimo leh bal dhageysta labadan kulan oo ay Somali isugu timid ee si cad loogu sheegay inay dalka uu dagaal sokeeye halis ugu jiro. Somaliya koox kuma adkaan karo. Sida dhabtu tahay qabiilada haddii ay damcaan inay xoog ku adkaadaan, ku adkaan kara oo dhaqaalaha iyo degaanka haysta diyaar uma aha inay dalka wada qabsadaan ee waxay rabaan in la wada noolaado oo qolo waliba wax loo hambeeyo.
Somaliya waxay ku kala adkaan kartaa sharciga oo loo sinnaado, laakin kuma kala adkaan karto in loo kala eexdo ayey qabiiladdaas aaminsan yihiin.
Waxaan araknay twiiter leh maxaa Jeeka loo dhigay Sheekh Xasan Dahir (H/Gedir-Hawiye) gudoomiyihi shuuradii maxaakiimta Islaamka iyoSheekh Mukhtaar Roobow (leysaan/Digil iyo Mirifle)guddoomiye ku xigeenkii Alshabaab, iyadoo Zakariya Ismaciil (Marreexaan -Daarood)madaxii kooxda shabaabka dilalka u qorsheyn jiray, isla markaana u fulin jiray uu u yahay madaxda NISA oo laga amarqaato oo ay suuragal tahay inu wali fulinayo dilalkii uu shalay fulinayey?
Dadka Somaliyeed shalay ugu ma muuqan sidaan oo Roobow, Xasan Dahir iyo Zakariye uma kala sokeyn oo mid amarkiisa wax lagu dilo iyo mid wax soo dilo ayey ahaayeen, hasa yeeshee maanta waxay noqdeen kuwa kala qiimo badan, kala Sharaf badan oo kala qabiil wacan.
Marka arinkaan wuxuu nagu celinaayaa meeshii aan ka nimid, haba soo daahee.
Bal walaalka Somaliyeedow adigoo Eebbe ka cabsanaya nala dhageyso labadaan cod oo gaaray geesinimo ah inay meel cad sidaan uga hanjabaan maxaasa dhici kara haddii ay berri ku dhawaaqaan dagaal iyo waa wareey ah sow ciilka ka hadashiiyey waayeelkan ma wada dagaanoo dadkii uu u hadlay.
Runtii waa cabsi iyo calool xanuun badan laakiin aan dabbaal iyo caaqil calool buuxsi haystaa u muuqan maanta, balsa u muuqda aqoonayahan fulay ah, iyo siyaasi is leh koox kale ha kacdo ee adigu hadhow guro miraha guusha ay kuwaas dhaliyaan adigoo dharkaagu kuu cad yahay.
Farmajo, Kheyre iyo Fahad waa kansar dalkaan hadimo u wada haddaan maanta la qaban berri ayaa laga geli doonaa dagaal lagu hoobto iyagana waa iska carari doonaan oo dalalkii ay ka yimaadeen iyo Qatar ayey aadi doonaan.
Previous articleYaa ka dambeeya siyaasadda burburinta Baarlamaanka, Mucaaradka iyo Maamul Goboleedyada Somalia?
Next articleUgaaska beesha Mariixaan oo ku baaqay dagaal ka dhan ah Jubbaland (Daawo)
Wadahadalo Garowe ugu bilowday Deni iyo Rooble
Musharaxiintii MW Farmaajo watay oo eersaday taageerida DFS